परिवारले हारगूहार गर्दा पनि किन ल्याउन दिदैन भारतले भारतीय सेनामा निधन हुने नेपालीको श:व ? — SuchanaKendra.Com
परिवारले हारगूहार गर्दा पनि किन ल्याउन दिदैन भारतले भारतीय सेनामा निधन हुने नेपालीको श:व ?
भारतीय सेनामा भर्ती भएर विरगती प्राप्त गरेका नेपालीको लागि अर्को पी डा छ । एकातिर आफ्नो परिवार गुमाउनु परेको छ भने अर्कोतिर श व समेत नेपाल ल्याउन पाइदैन । भारतमा निधन भएका नेपालीलाई भारतीय सेनाले उनै अन्तिम संस्कार गरिदिने गरेको छ । मृ तकका परिवारलाई भारतमै बोलाएर उतै अन्तिम संस्कार गरिन्छ । गत विहिवार फेरी एक नेपालीको निधन भएपछि यो विषय फेरी उठेको छ । गत नोभेम्बर २२ तारिखमा दिल्लीमा तत्कालीन भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख विपिन रावतसँग भेटघाट गर्दै भूतपूर्व भारतीय गोर्खाका प्रतिनिधिहरूले नेपालीको श व स्वदेश लैजान पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
भिड न्त वा दुर्घ टनामा परेर निधन हुने भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको श व नेपालमा ल्याउन दिइनुपर्ने माग भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले गरेका छन्। हाल भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाहरूको निधन भए उनीहरूको श व भारतमै अन्त्येष्टि गरिदिने चलन रहेको छ। तर कतिपय मृ तक सैनिकका परिवारले नेपालमै ल्याएर आफ्नै संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गर्न चाहने गरेका छन्।